Dowlada Federalka oo qorsheyneysa inay dhisto Xarun lagu ururiyo Zakada - Jowhar Somali Leader
Home Somali Dowlada Federalka oo qorsheyneysa inay dhisto Xarun lagu ururiyo Zakada
Dowlada Federalka oo qorsheyneysa inay dhisto Xarun lagu ururiyo Zakada
Dowlada Federalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay qorsheyneyso inay dhisto xarumo lagu ururiyo zakada si dhaqaale loogu helo arrimaha degdegga ah ee soo wajaha shacabka Soomaaliyeed.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Cismaan Aadan Dhuubow ayaa ku tilmaamay furista xarumaha zakawaadka inay tahay mid wax loogaga qaban karo dhibaatooyinka dalka ka jira iyo weliba dadka saboolka ah inay helaan dhaqaale ay ku noolaadaan.
Cismaan Aadan Dhuubow Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Xukuumadda Soomaaliya waxa uu tilmaamay in dhismaha Xaruntaas ay ku howlan yihiin si waxqabad wanaagsan Bulshada ugu noqoto.
“Abaarta, Fatahaadaha, Musiibooyinka iyo Cudurada faafa ayaa wax looga qaban karaa dhaqaalaha ku dhaca Xarunta Sakawaadka marka la soo idleeyo howlaha lagu dhidbayo.”ayuu yiri Wasiir ku xigeenka Owqaafta iyo arrimaha diinta.
Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegtay in waxyaabo badan ay isbadal ku sameyn doonto, iyada oo sanadkii hore tartan ay gelisay Shirkadaha Xujeyda qaada, sidoo kale isla sanadkaan ayay soo bandhigtay.
Hase yeeshee ururka Alshabaab ayaa ka qaada lacago zakawaad ah ganacsato badan oo ku kala nool deegaano kala duwan oo ka mid ah dalka Soomaaliya.